Ifektri engaphezulu ye-surface mounted seal, Abahlinzeki - China Surface egibele phansi uphawu lwabakhiqizi
Uphawu lomnyango womlilo
Izimpawu zomlilo eziqinile
Umlilo oqinile kanye nophawu lwentuthu
Fire & uphawu acoustic
Uphawu lomlilo oluguquguqukayo
Uphawu lomlilo olukhethekile
Umlilo ulinganise uphawu lokudonsa phansi
Ikhithi yokukhiya umlilo ne-Hinge pad
Fire glazing uphawu uhlelo
Izimpawu Zentuthu Yesigcilikisha
Beka phansi uphawu
I-seal efakwe phansi yaphansi
Uphawu lokudonsela phansi oluhlanganisiwe
Beka phansi uphawu lwengilazi
Beka phansi uphawu lokuhambisa umnyango
Beka phansi izinsiza kusebenza Seal
Beka phansi uphawu lokufaka izibuko ...
Beka phansi uphawu lokuslayida ...
Isilinganiso somlilo esilinganiswe ngomlilo G ...
Okuhlanganisiwe kwehla uphawu lwe-GF ...
I-seal egibele phansi ye-drop down GF-B12
I-GF-B12 uphawu lwangaphandle olukhishwe ngaphandle lufanele amaphrojekthi wokulungisa ngemuva. Uma umnyango ufakiwe, udinga ukwengeza ukwahlukanisa umsindo, ukufudumeza izinga lokushisa, ukuvimbela uthuli neminye imisebenzi. Kulula futhi kulula ukuyifaka ebusweni bezansi lomnyango; ukubukeka kuhle. • Ubude: 380mm-1500mm • Igebe lokuvala: 3mm-15mm • Qeda: Isiliva eli-Anodised
Surface egibele phansi iconsi GF-B01
I-GF-B01 I-seal-mounted drop down seal ilungele amaphrojekthi wokulungisa ngemuva. Uma umnyango ufakiwe, udinga ukwengeza ukwahlukanisa umsindo, ukufudumeza izinga lokushisa, ukuvimbela uthuli neminye imisebenzi. Kulula futhi kulula ukuyifaka ebusweni bezansi lomnyango; isikhundla sokufakwa kwezingxenye eziqinile zomkhiqizo simbozwe yimichilo yokuhlobisa, eyisicaba futhi enhle. • Ubude: 380mm-1500mm • Igebe lokuvala: 3mm-15mm
Surface egibele phansi iconsi phansi GF-H1001
GF-H1001 It is a adjustable ngokuzenzakalela yokonga amandla sealer. Umkhiqizo wakhiwe ngedivayisi yokulungisa nokunwebeka. Ibhulashi lingaguqulwa ngokuzenzakalela ngokuya ngobude bomhlaba ukuvumelanisa nenhlabathi ukufeza umphumela omuhle wokufaka uphawu futhi unciphise ukugqoka kwebhulashi. • Ubude: 440mm-1500mm • Igebe lokuvala: 1mm-5mm
Surface egibele phansi iconsi GF-B092-1
GF-B092-1 Ukuze ugcine umsebenzi we-grooving ezansi komnyango, i-B092-1 enwetshiwe yohlelo lokufaka phansi uphawu lwenzelwe ngokukhethekile. Vele unciphise ukuphakama komnyango ngo-34 ~ 35mm lapho udizayina, bese ulungisa isiqeshana esingezansi somnyango ozenzakalelayo ngqo kusuka ezimpikweni ezimbili ezinezikulufo. Umsebenzi wayo uyefana neGF-B092, umucu wokufaka uphawu uvuka ngokuzenzakalela, futhi umugqa wenjoloba awunakho ukungqubuzana nomhlabathi. • Ubude: 330mm ~ 1500mm, • Imininingwane ejwayelekile: 510mm, 610mm, 710mm ...
Surface egibele phansi iconsi phansi GF-B03-1
I-GF-B03-1 Ukuze ugcine umsebenzi we-grooving ezansi komnyango, i-B03 enwetshiwe yohlelo lokufaka phansi uphawu lwenzelwe ngokukhethekile. Vele unciphise ukuphakama komnyango ngo-34 ~ 35mm lapho udizayina, bese ulungisa isiqeshana esingezansi somnyango ozenzakalelayo ngqo kusuka ezimpikweni ezimbili ezinezikulufo. Umsebenzi wayo uyefana neB03, umucu wokufaka uphawu uvuka ngokuzenzakalela, futhi umugqa wenjoloba awunakho ukungqubuzana nomhlabathi. • Ubude: 330mm ~ 1500mm, • Imininingwane ejwayelekile: 510mm, 610mm, 710mm, 810mm ...
Surface egibele phansi iconsi phansi GF-B042
I-GF-B042 Yakhelwe iminyango esindayo, ingafakwa ngaphakathi noma ifakwe ngaphandle. I-knob yokulungisa ingatholakala ngakwesokudla noma kwesobunxele. Ingashintshwa ukuze ivule iminyango engakwesokudla noma kwesobunxele. Isetshenziselwa kakhulu iminyango edinga ukufakwa komsindo okuphezulu emabhizinisini ezimboni nasezimayini. Ngokufakwa okushumekiwe okungaphakathi, gcina ukuphakama okungu-44mm ezansi komnyango, beka umkhiqizo endaweni yawo, bese uwulungisa ezimpikweni ngezikulufo. • Ubude: 450mm-2300mm • Igebe lokuvala: 3mm-15mm. • Fini ...